Indaba yeBojan Krkic yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts
ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola baseSpain Indaba yeBojan Krkic yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba epheleleyo yeSteke City Legend eyaziwa kakhulu ngeSiza; "Kicky". Ibali lethu leBojan Krkic Childhood Indaba kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela ngexesha lokuzalwa komntwana. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho kunye nezinto ezininzi ezithintekayo ngaye.
Ewe, wonke umntu uyazi malunga nembali yakhe kunye neBarca kodwa bambalwa bacinga uBojan Krkic's Bio enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokunye okunye, masiqale.
Iindaba zeBojan Krkic Childhood Plus I-Untold Biography Facts -Obomi bakwangoko
UBojan Krkić uPérez wazalwa ngelo I-28 ngomhla ka-Agasti 1990 eLinyola, eSpain kubayise waseSerbia, uBojan Krkić Sr., owayengumdlali webhola webhola kwi-side yaseSerbia i-OFK Beograd. Uhlobo lwakhe lwebhola lwafika ngokukhawuleza njengoko wayehamba.
Eneneni, uyise, uBojan Sr. wachaza ngokuqinisekileyo umzuzu owakhankqalaza ukuba unyana wakhe omncinci unokufumana italente ekhethekileyo. Ngamazwi akhe ... 'Andiyi kulibala,' utsho. 'Ndigijime iqela lebhola lebhola e-Catalonia. UBojan wayeneminyaka emihlanu kwaye wafika kwimidlalo. Ngelinye ilanga, sasinomfutshane omncinane ukudlala i-six-side-side kunye nomqeqeshi onomhlobo wam osondeleyo wathi, "Masibeke unyana wakho". UBojan wayegqoke kwi-kitty Barca, imibala efanayo kunye neqela lethu. Ngethuba lokuqala ekufumeni ibhola uqala ukuqhubela phambili kwiinjongo zakhe aze athabathe iphosi! Siyamemeza, "Bojan, nqama, yeka! musa ukusebenza nzima! musa ukudubula kanzima, ungenzi buhlungu inyawo zakho! "Eneneni, oko kwakungokuqala kwakhe kwebhola. Kwaba ngcono.
Kuyinto engaphantsi kokuqonda. Omncinane uBobjan wafumana iinjongo ezintathu ngaloo mini, ngokuchasene neminyaka emibini ubudala. Wabizwa ngokukhawuleza njengomdlali ongcono kumdlalo, emva koko ummandla wonke. Ukubhaliweyo njengoluhlu olungcono kumasipala waseSinyola waseSpain ngokuqinisekileyo kwakhokelela kuFacebook u-Martinez Vilaseca, wafika wabiza waza wangqongqoza emnyango. Ngaphambi kokuba umntu azi, le ncinane uBojan wajoyina i-FC Barcelona.
I-FC Barcelona ihlola iVilaseca kamva ikhumbula: Kambe uBobjan wafika kwenkampu yam ehlobo eAndorra eneminyaka ezisixhenxe kwaye ndafika kwifowuni ndaza ndathi, "Umele ujonge le nyana". Wayengumqili, ngokukhawuleza nangengqiqo engaqondakaliyo yokubala amanqaku. Wabonisa iimpawu ongazibonanga kubadlali abaphezulu.
Inkqubela yeBojan e-Barcelona yayingumlando. Uyise uyanezela: 'Kwiseshoni yokuqala yokuqeqesha e-Barcelona, ​​wafumana amanqaku asixhenxe. UBojan wadlala kumaqela olutsha aseBarcelona ukusuka kwi-1999 ukuya kwi-2006 yokubeka amanqaku ngaphezulu kweenjongo ze-900 ngokubhekiselele kumaqela ahlukeneyo olutsha. Wawina amanqaku amaninzi. Ngezantsi i-Bojan iqokelela ibhaso ngenkqubela e-Andorra njengomntwana, kunye noyise
I-FC Barcelona yanikezela yena ummangalisa omkhulu inkqubo yakhe yolutsha (La Masia). Akuzange kuthathe ixesha elide ngaphambi kokuba abazali bakhe bathuthele kwisixeko esiyintloko. Ootatomkhulu ozala umama kaBojan bashukunyiswa ngokusisigxina ukukhusela iBojan ekutshitshiseni kweso sixeko esikhulu. Ukugqithisa kwamenza wamenza umzekelo xa edlala ibhola. Ubuncinane uBojan wayengumzekelo othakazelisayo kunye ne-nick makeup njengoko kuboniswe ngezantsi.
Umsebenzi wakhe webhola lebhola wahamba ngokucokisekileyo njengokuba wayexhamla kwi-modeling. UBojan waqalisa ukusebenza kwakhe eBrazil emva kokuqhubela phambili kwinqanaba lolutsha. Isithembiso sakhe sokuqala sambona wenza iqela lakhe lokuqala lokuqala kwiminyaka eyi-17 kunye neentsuku ze-19, ukuphula iirekhodi ebekwe Lionel Messi. Ngaphantsi kolawulo lukaFrank Rijkaard, uBojan wagxeka njengomntwana oselula, ecaleni Lionel Messi, Xavi kwaye Thierry Henry.Bonke abaseBojan, njengoko bathethayo, ngoku iimbali.
Iindaba zeBojan Krkic Childhood Plus I-Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi
Ngeminyaka eyi-18, uBojan osemncinci wayeziva ekhulile ngokwaneleyo ukuba abe nolwalamano. UBraca Cusine ngelo xesha wayeyintombazana eyayiyithanda kwaye yayifuna intliziyo yakhe. Emva kokuthatha amanyathelo angamaqhinga ukuze amcele, uBraca wavuma kwaye bobabini baba ziintando ezinamandla. Ubuhlobo bukaBojan noBlanca Cusine baqala ngo-2008.
Bobabini abathandi banomdla ngokuphandle iminyaka eyi-10 yokuba kunye. UBraca Cusine uhlala yintombazana yedwa oye wayidla ubomi bakhe bonke.
Iindaba zeBojan Krkic Childhood Plus I-Untold Biography Facts -Ubomi Bentsapho
UBojan unentsapho enkulu kakhulu eneengcambu ezivela kwiSerbia neSpain. Intsapho yakhe idla ngokumtyelela ngokuzihlanganisela ekhaya lakhe laseNgilani.
Xa uBojan e-Roma naseMilan, wafika ekhaya ngeKrisimesi kodwa eqhubeka nebhola laseNgilani. Abazali bakhe kunye nolwalamano bahlala bezisa iKrisimesi kuye. Baya kushiya isiza-moya saseBracel nge-suitcase enamandla egcwele ukutya, enye into enezinto ezithandekayo zikaBojan, abadlali bakhe abathandayo kunye ne-ham eninzi yaseSpeyin.
Unina unina uPerez noyise, u-Bojan Krkic Sr maxa wambi unxulumene nonina wabo, iinzala kunye nabazala. UBojan kunye nentombi yakhe yexesha elide uBlanca uthanda ukulungiselela ukuhlasela kweKrisimesi evela eSerbia naseSpain.
UBojan ungumhlobo kunye noCesc Fabregas - 'Basondele, bevela esikolweni saseBarcelona kodwa badlala neCatalonia,' kusho unina. Umama kaBojan uhlala ekhuthaza unyana wakhe. UBojan namhlanje akanakuze alibale ukuba umama wakhe walungiselela njani ukuzalwa kwe10th emva kweCatalonia.
Iindaba zeBojan Krkic Childhood Plus I-Untold Biography Facts -Ubomi bomntu
UBojan uneziphumo ezilandelayo kubuntu bakhe.
Amandla eBijan: Uthembekile kumlingani wakhe, uhlalutyo, unomusa, usebenza nzima, kwaye uyasebenza kakhulu.
Ubuthakathaka beBojan: Unokuba neentloni, ukujamelana noxinzelelo kunye ne-citicism, uxhalabise ngenxa yokulahlekelwa kwefomu kunye nokugxeka ngokuzimeleyo nabanye.
Yintoni uBojan ayithandayo: Okokuqala, Izilwanyana, ukutya okunempilo, iincwadi, uhlobo, ucoceko
Yintoni uBojan ayithandiyo: Ukuhlambalaza, ukugxekwa ngabantu abaninzi kakhulu, ukunyanzeliswa, ukuthatha isigaba sokuqala kunye nokuxhomekeka.
Isishwankathelo, uBojan ngumntu ohlala ebeka ingqwalasela kwiinkcukacha ezincinci kunye nokuqonda kwakhe kobunzulu bomntu kumenza omnye wabadlali bebhola abanobuqili. Unendlela yokwenza ubomi. Unentliziyo yentliziyo ekwazi ukuvalwa kwilizwe langaphandle ngaphandle kwentsapho yakhe kunye nabahlobo abasondeleyo. Ekugqibeleni, unokuthatha isenzo esingaziqondi kakuhle. Umzekelo ukushiya iFC Barcelona ukuya eSekke City.
Iindaba zeBojan Krkic Childhood Plus I-Untold Biography Facts -Apho konke akuhambanga kakuhle
Ukuqhuma kweBojan eBarcelona kuhambelane nexesha le-trophy ne-Barcelona eyayiyimbangela yokulila eCatalonia. Kwakuyixesha elithile indawo yokugqoka yayingqinekanga.
Beyiinkwenkwezi zamazwe ngamazwe URonaldinho, U-Etoo njll uyise uBojan Snr, uthe. Bambona inkwenkwana eqala imidlalo. Ngamaxesha athile, URonaldinho wayekho kwibhentshi kwaye uBojan uqala. Unokucinga, eh? Kulula. Kwaba nzima kakhulu, uBojan akazange avunywe nguye wonke umntu.
Kodwa ngokulindela okukhulu kuvela uxinzelelo olukhulu kwaye uBojan akakwazanga ukujamelana nayo. Wabizelwa kwiqela leSpain kodwa wakhupha kunye noko kwachazwa ukuba kuhlaselwa yintlanzi. Wabizelwa kwi-Euro 2008 kodwa wabuya waphuma. Wayenguye, wathi, "ngokuphazamiseka ngokwenyama nangokwemvakalelo ngelo xesha". "UUxinzelelo lwalukhunjulwe kumahlombe amancinci njengomntu onokuthi abalandeli baziva bezithiyile ngenxa ye-benching Ronaldinho".
"Ngobusuku, andinakuze ndihambe ngezitrato, "Kusho uBojan. "UAndikwazi ukuya kumcimbi wokuzalwa okanye kwi-cinema."Wazama ukuqhubeka esikolweni kodwa kwakungenakwenzeka. Yonke imihla, i-paparazzi yayikho, yayininzi. Wagqiba ukwenza yonke umsebenzi wakhe kwi-intanethi. Wahlaziywa ukuze ahlole ubusuku ngaphambi komdlalo.
Ekuqaleni kwexesha le-2008 / 09, kwakukho umntu omtsha ophetheyo. Ukulahlekelwa ngumphathi weDatshi kwaba yinto enkulu yokuKrkic. "U-Rijkaard wayethembele ngokupheleleyo kum," Bojan sitsho. "Unobuntu obukhulu. Ndandidlelane naye engazange ndibe nalo nabanye. " phantsi Pep Guardiola, UKrkic wawa emva kwendlela yokukhangela kwaye waqala ukufumana ukubonakala okumbalwa kunye nokumbalwa, okwenza ngaphantsi nangaphantsi kwimpembelelo xa edlala. Ngokukhawuleza kukhokelela ekuphumeni phakathi kwakhe kunye Guardiola kwaye emva kwamanye amaxesha angamawaka ambalwa, uKrkic wayeya kwilabhu kwi-2011 ngaphandle kokutshilo.
Uyise wathi: 'Ekugqibeleni, uBobjan ucele ukuba ahambe eRom ngenxa yokuba uGaldiola waqhekeza isithembiso sokuthi uza kudlala indima ekupheleni kweMidlalo yeL Champions League eWembley.
Iindaba zeBojan Krkic Childhood Plus I-Untold Biography Facts -Ubomi Ngaphandle kweRomania
IRoma ibonakala ngathi yinto ecacileyo. Indoda ethathe indawo Guardiola njengoko umphathi weqela leBarcelona B, uLiis Enrique, wayephethe kwaye abanikazi beqela babezimisele ukuba iqela ukudlala ngendlela uKrkic ayedlula ngayo.
At eRoma, wayenexesha elide lokudlala ukuze akhangele - wenza ukubonakala kwe-33 ngexesha lakhe lokuqala, ngaphezu kwanoma yimuphi omunye umdlali wonyaka - kunye neengqungquthela azenzayo, ebhala iinjongo ezisixhenxe kwixesha lakhe lokuqala. Nangona kunjalo, ifomu yakhe yayingavumelani kwaye akazange akwazi ukuzibophelela kwimidlalo. Kwakhona amathuba amaninzi aye ahlaselwa kwaye wuleza wambalwa ngabanye abadlali ngaphakathi kweqela. Ukungabikho kwamandla akhe - kungekhona into enkulu eSpeyin - yamgxotha kwaye ukusola ngokungahambi kwengqondo yakhe kwanyusa kwakhona iintloko.
"Kukho ubungqina obunamandla kwiSerie A kunye neBojan kwakungekho omnye wabo," Umculi webhola ye-Italy uSusy Campanale. UBojan wayebonakala ekhulile kwaye umntu owayengenalo ithemba.
Ukuphela kwexesha lakhe lokuqala kwiRom wabona uLis Enrique ephuma kwiklabhu kunye noKrakki kungekudala bamlandela. U-Borjan wagqiba ukuzama inhlanhla yakhe ngemali yokuboleka imali eMilan. Waqala imidlalo elithoba kuphela-wenza enye i-14 ukubukeka kwi-benki-yafumana iinjongo ezintathu nje. Wenza uhlobo oluchaphazelayo kwiRossoneri. Nangona kunjalo, kukho umcimbi omnye. Kwakuyigatya esivumelwaneni sakhe kwakusithi iMilan yayiza kuyithenga ngokusisigxina ukuba idibene nenani elithile lokubonakala. Ngelishwa, uBojan akazange ahlangane. Emva kwexesha le-2012-13 e-Italy, uBojan ubuyele kwiqela lakhe langaphambili leBarcelona nge-€ 13 yezigidi. Emva kokuba engayifumana imizuzu emibini kwakhona, waqala ukubolekisa iAjax apho wabancedisa ukukhusela isihloko sabo se33rd kunye nesine esilandelanayo.
Iindaba zeBojan Krkic Childhood Plus I-Untold Biography Facts -Uhambo ukuya eStoke
Ukufuna isiqalo esitsha, uBojan wafumana ithuba lokufumana into ekhethekileyo noMark Hughes. Xa uHughes e-Man City, wabiza uBojan waza wazama ukumsayina. Xa wayeseFulham, naye wazama ukusayina iBojan. Ngoko xa ephinda ebiza eStoke, uBojan wathi ufuna ukuhlala kwiqela elithile apho axabiswa khona kwaye waphathwa kakuhle. Igama leqela (Stoke) alinandaba. Ufuna ukunandipha ibhola. U-Hughes wahlala eBojan waza wamqinisekisa ukuba yinto efanelekileyo.
UBojan ufanelwe ubomi kwibhola leNgesi. Wahlala yokuhlala kwidolophana yaseCheshire eWilmslow waza waqasha indlu kaNomanja Vidic. Wabuyisela ubuhlobo obusondeleyo kunye neSpeyin e-Manchester United, ephumayo UDavid De Gea kwaye Juan Mata, kunye nokwazisa abatsha nabadlali, ikakhulu uSteven N'Zonzi, Geoff Cameron kunye Victor Moses.
NjengoBojan ubeka; "Imbali yam kunye nentando yeBrazil iya kuhlala ihlala, kodwa ubomi buqhubeka" UBojan ubhekene neCape del Rey troph, i-Champions League trophy kunye ne-La Liga trophy kwi-2009.
QHUBEKA: Siyabonga ngokufunda ibali lethu leBojan Krkic Childhood kunye neengxelo ezingezizo. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke izimvo zakho Qhagamshelana nathi!.
IDiske City Football Diary
I-Nacho Fernandez Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts
Xavi Hernandez Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts
I-Cesar Azpilicueta Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Denis Suarez Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
U-Andres Iniesta Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Kepa yabantwana Ibali Plus Untold Biography Facts